လေနုအေး: မြင်တွေ့ ချင်သူများ
Posted by တန်ခူး at 5:50 PM
အမ်.. ပို့စ်အသစ်ကို ဖတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ ပြုံးပြုံးကြီး လာဖတ်နေရင်း နောက်ဆုံးတော့ တက်ဂ်ထားတဲ့ ထဲ ကိုယ်က ထိပ်ဆုံးက... ၀ိုးးးးး ရေးဦးမှာနော် ၀မ်းမြောက်စွာ...
ရောက်လာပါတယ်။ မရောက်ဖြစ်တာကြာလို့ ဟိုဟိုဒီဒီတော့ လျှောက်ကြည့်သွားတယ်။
အတော်များများဖတ်ကောင်းပါတယ်။ ကိုပေါနဲ့ အမေးအဖြေကိုတော့ အတော်နှစ်သက်သွားတယ်။
အဲဒီခရီးကို တို့က တန်ခူးရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်နဲ့ အတူတူ တပါတည်း လိုက်လည်နေတာနော်...။ (ဆီဖိုးမပေး ဘာမပေးနဲ့...)
ဒါထက် စကားမစပ် နိကလေးကို တရက် နှစ်ရက်တော့ ပြန်မပို့ပဲ ဒီမှာပဲ ထားလိုက်ကြရအောင်လေ.. နော်။
မေဒေး ပိတ်ရက် ၃ ရက် ဆက်ရတော့မှ ဂျပန်ကို တခေါက် သွားပြန်ပို့ ကြမယ်လေ... ကောင်းဘူးလား...။
ပန်ဒိုရာကို တက်ဂ်ထားတယ် ဆိုတော့.. ခက်တော့နေပြီ.. ဒီတက်ဂ် ဂိမ်းကို တွေ့ကတည်းက ကိုယ့်ဆီရောက်လာမှာ စိုးနေတာ... အဟဲ..
ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် ရေးပေးပါမယ် လေ..။
ချစ်စရာကောင်းတာနဲ့အမျှ စိတ်ကူးယဉ်စရာကောင်းလိုက်တဲ့ post လေး...
တန်ခူးရေ.. ကံ့ကော်ပန်းတွေက မွှေးလိုက်တာ.. အပင်စိုက်ထားလို့ ရတဲ့ နည်းပါ ယူခဲ့အေ.. :)
ကြက်ပေါင်းရည်ကလေး လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုလို့ အားတွေကိုရှိသွားတာပဲ။
စာမေးပွဲနီးလို့ ဘလော့မရေးဘူး စိတ်ကူးထားပြီး စိတ်က မပြတ်နိုင်လို့ ဘလော့လည်ထွက်နေမိသေးတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ မ-ရဲ့စာကို ဖတ်ဖြစ်သွားရော ... :)
လာဖတ်သွားပါတယ် မတန်ခူးရေ..။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင် ရေးနိုင်ပါပေတယ်ဗျာ။
ပန်းမျိုးစေ့တွေ ပါမယ်ဆိုလို့ မလေး မျက်နှာ ပိုပြုံးသွားတယ်...
မလိုင်လုံးက တလုံးတည်းလား။ ဒါဆို ဘောလုံးလောက်ကြီးတာမျိုးပေး..
အဲလိုသာ လာလည်ရင် သိပ်ပျော်မှာ။
တန်ခူးရေ..မျောသွားရင်း ပို့စ်တခုလုံးကို ပြုံးစေ့စေ့နဲ့ ဖတ်သွားလိုက်ရတာ..တို့လည်း သက်ဝေနဲ့အတူတူ လိုက်လာခဲ့မယ်လေကွယ်..ပေါက်စ် စကားစမပြတ်လို့ မမကွန်နဲ့အတူ ပါလာတယ်ဆိုလို့ ရီလိုက်ရတာ..ပျော်စရာကြီးနော်...။
အမတန်ခူးရေ ရေးလည်းရေးတတ်ပါ့ဗျာ။ ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ ရေးထားပုံက။ အင်း သဘောကောင်း အလိုက်သိတတ်တာ ပို့စ်ထဲမှာ တွေ့နေရတယ်နော်။ လက်ဆောင်တွေတပွေ့တပိုက်ကြီးနဲ့ မောင်နှမတွေဆီ လည်နေပုံက ပျော်စရာ ချစ်စရာပါ့လား။ ဒါနဲ့ အားလုံးကိုပေးမည့် လက်ဆောင်တွေ နိနိ အပိုင်သိမ်းလိုက်ရင် ကောင်းမလား။ အမသက်ဝေပေးတဲ့ အကြံကိုလည်း ထောက်ခံချင်လိုက်တာနော်။ လက်ခုပ်လေးတီးပြီးတော့လေ။ ဒီလိုပဲ ကိုဇနိဆီကို တကယ်လိုက်ပို့ပါလား အမရေ။ မေ့ထားခဲ့တာတဲ့ အမက ချစ်စရာကောင်းသား။ အမချိုသင်းသာဆို မေ့မထားလောက်ဘူး အတင်းထိုင်စောင့်ပြီး ပြန်ခေါ်လောက်တယ်။ သူ့အတွက် မလိုင်လုံးလေးတလုံးတဲ့။ ဟိဟိ နည်းလို့ ငိုနေလောက်တယ်နော်။ ချစ်စရာအလေ့လေးတွေ ပေါ်လွင်အောင်ရေးးတတ်တဲ့ အမပို့စ်ကြောင့် စိတ်ညစ်နေတာတွေ ပင်ပန်းနေတာတွေတောင် ပျောက်ကုန်ပြီ။
မက်ဒေါနားနဲ့အင်ဂျလီနားဂျိုလီတို့ ကို မြန်မာကလေးလေးတွေ ဘာကြောင့်မွေးစားဖို့စိတ်မ၀င်စားတာမဟုတ်ဘူး အစ်မရဲ့။
Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption (Hague Adoption Convention). Therefore, when the Hague Adoption Convention entered into force for the United States on April 1, 2008, intercountry adoption processing for Burma did not change.
ဟူ့ဂရန့်တဲ့လား ... တန်ခူးရယ် ... တို့လဲကြိုက်တယ် ...
တက်ခ်ထားတာ ခုမှတွေ့တယ် ... ရေးမယ် ... အေးဆေးနော် ...တန်ခူးရေးသလိုလေး ချစ်စရာကောင်းအောင် ရေးတတ်မည်မထင် ...း)
အစ်မရေ ဒညင်းသီးတွေ ၀က်သားနဲ့ ချက်စားလိုက်ပြီ ကောင်းလိုက်တာ...ဟဲဟဲ။ ပျော်စရာကြီး။ အစ်မရဲ့ ကိုယ်ပိုင် လေယာဉ်ကြီးပေါ် အလည် လိုက်ခဲ့ဦးမှ ထင်တယ်။
အမတန်ခူးရေ ကျနော့ဆိုင်လာမယ်ဆိုပြီး ကမ္ဘာပတ်နေတာကြာလို့ အစ်ကိုက သားသားနဲ့နောက်ကတုတ်တစ်ချောင်းနဲ့လိုက်လာတယ်ဗျ။ ကိုဂျူလိုင်ကို ရှင်းခိုင်းထားတယ်။ ကျနော်တော့ နောက်ဖေးမှာ ပုန်းပြီး ပန်းကန်ဆေးလိုက်ဦးမယ်
ရေးပြီးပြီဆိုတာ လာအကြောင်းကြားတာပါ :)
အမရေ.. ဖတ်ပြီးတော့ အမတွေ့ချင်တဲ့သူထဲမှာပါတော့ ပျော်သွားတယ်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာတွေ့မယ်ဆို ဆိုင်က မောင်းထုတ်ခံရလောက်အောင် အချိန်အကြာကြီး စကားပြောဖြစ်နေမှာပေါ့။ ဒါမှမဟုတ် တဆိုင်ပြီးဆိုင်ပြောင်းထိုင်မယ်လေ...
အမစိတ်ကူးနဲ့ရေးတာ ပျော်စရာကြီးနော်... လေယာဉ်မဆန့်လည်း တွယ်ပြီးလိုက်ရ လိုက်ရ လိုက်ခဲ့မယ်... :)
မတန်ခူးရေ... တက်ဂ်တာ ရေးပြီးပါပြီ
အစ်မရေးထားတာ အကုန်ပါတယ် ပျော်စရာကြီး ဂယ်သွားဖြစ်ရင် ညလေးကို လက်တို့လိုက်နော
စာအုပ်လက်ဆောင်တွေ အတွက် ကျေးဇူးပါ..
လက်ဆောင် ဆို စာအုပ်မှ-း)
ရေးပေးမယ်နော်.. ဒါမဲ့ ဖြေးဖြေးမှ-
မတန်ခူးရေ- ရေးပေးထားပါပြီ။း)
Lose Crawling Downloads Using NZB Files You Can Swiftly Search HD Movies, Console Games, MP3 Singles, Applications and Download Them at Fast Rates
Making money on the internet is easy in the underground world of [URL=http://www.www.blackhatmoneymaker.com]blackhat tools[/URL], Don’t feel silly if you have no clue about blackhat marketing. Blackhat marketing uses little-known or little-understood ways to build an income online.
နေတတ်ရင် စင်ကာပူ - ကဲ ဘော်ဒါတွေ ကြက်ကိုကြော်တဲ့ကြက်ကြော် လာပြီနော်၊မီးခိုးနဲ့ညှော်နံ့တင်လှည်းကလေးတိုက်အောက်ရောက်ပြီ။ အမှိုက်ပစ်မယ် အမှိုက်အမှိုက်လှည်းထဲက ကလေးကသူမြင်သမျှကို အမှု...
အမြင့်သို့ အာရုံညွှန့်တက်ခြင်း - ပင်လယ်ကမ်းခြေအနီးက ကျောက်ကမ်းပါးပြတ်မှာ ရပ်ရင်း … မျက်စိတဆုံး ကျယ်ပြောလှတဲ့ ပင်လယ်ပြင်ကြီး၊ ကျောက်ကမ်းပါးကို အရှိန်အဟုန် ပြင်းပြင်းနဲ့ ရိုက်ခပ်လာတဲ့ ဧရာမလိ...
တွေးမိ​တွေးရာ ပုံပမာ - *** ဟိုး​ရှေး​ရှေးတုန်းက​ အင်​တာနက်​ ကမ္ဘာကြီးထဲက ဘ​လော့ရွာ​လေး တစ်​ရွာမှာ ​"တွေးမိ​တွေးရာ ​ရေးမိ​ရေးရာ" ဆိုတဲ့ ဘ​လော့အိမ်​က​လေး တစ်​အိမ်​ ရှိသတဲ့။ အဲဒီတု...